साप्ताहिक राशिफलः यो साता चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, सम्पत्तिको कारोबारमा हुनेछ बढोत्तरी तेसमा तपाईं पनि पर्नु हुन्छ कि?? भिडियो – News Nepali Dainik
साप्ताहिक राशिफलः यो साता चम्किदैछ यी ८ राशिको भाग्य, सम्पत्तिको कारोबारमा हुनेछ बढोत्तरी तेसमा तपाईं पनि पर्नु हुन्छ कि?? भिडियो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २३, २०७७ समय: १८:५३:४३
मिति २०७७ साल माघ २५ गते एकादशी तिथि आइतबारबाट फागुन १ गते द्धितिया तिथि शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल । यो साता ८ राशिहरु मेष, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुम्भ र मीन राशिका लागि शुभ छ।
कला संगीत एवं ध्यान साधनामा प्रगति मिल्नेछ । अध्ययनमा सामान्य प्रगति हुनेछ । सन्तानसँग भेटघाट एवं आर्थिक अवस्था सुध्रिनेछ । आम्दानीको स्तर बढ्नाले कारोबारमा सफलता एवं घरायसी विवाद कम हुने देखिन्छ । मुद्दा मामिला टुंगिने एवं आपसी वैमनस्यतामा मैत्री भाव आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक मेलमिलाप, प्रेमी प्रेमिका बीच सुमधुर सम्बन्ध बढ्ने एवं मिष्ठान्न भोजनको सुख मिल्नेछ ।
साताको शुरुमा घरायसी विवाद आउनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिनेछ । मित्रतामा बाधा आउने एवं माया प्रेममा मनमुटाव हुनेछ । आपसी सरसल्लाह नमिल्नाले व्यक्तिगत काममा बाधा आउनेछ । साताको मध्यमा भने व्यापारमा फाइदा एवं कृषि तथा तरल पदार्थबाट व्यावसायमा फाइदा हुनेछ । सवारी साधन तथा भोग विलासमा खर्च बढ्नेछ ।
साझेदारी लगानीमा फाइदा, व्यापार व्यवसायमा नाफा एवं साथी भाइको भेटघाटमा खर्च बढ्नेछ । विरोधी पक्षबाट भय एवं समस्या कम हुनेछ। वादविवाद एव प्रतिष्पर्धामा जित हासिल हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुने एवं मित्रता बलियो बन्नेछ । कुटुम्ब भेटघाट एवम पारिवारिक भोजभतेरमा सहभागिता मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने यात्रामा बाधा एवं स्वास्थ्यमा समस्या तथा काममा रोकावट हुनेछ ।
विद्या अध्ययनमा रुचि हुने तथा कला, साहित्य, संगीतमा पहिचान मिल्नेछ । आम्दानीको स्तर बढ्ने एवं धनसम्पत्तिको सहयोग मिल्नेछ । साताको मध्यमा भने बढी खर्च हुने एवं यात्रामा झन्झट आउनेछ । आफन्तसँग सामान्य मनमुटाव हुने तथा चिसोको समस्या हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक भेटघाट एवम विलासितामा धन खर्च हुनेछ । आफन्त भेटघाट तथा सन्ततीबाट खुशीयाली मिल्नेछ ।
पारिवारिक काममा व्यस्तता बढ्नेछ । मनोरञ्जनमा खर्च हुने तथा नयाँ ठाउँको भ्रमण हुनेछ । नयाँ नाता गाँसिने तथा वैवाहिक सुख मिल्नेछ । आफन्तको सहयोगले सानोतीनो व्यवहार टर्नेछ । नरम बोलीको प्रभावले ठूलावडासँग सम्बन्ध बन्नेछ । साताको अन्त्यमा भने काममा जिम्मेवारी थपिने एवं यात्रामा झन्झट आउनेछ । सवारी साधनले धोका दिने एवं खर्चमा वृद्धि हुनेछ।
धनसम्पत्तिको सहयोग मिल्नाले पूराना व्यवहारमा राहत मिल्नेछ। महत्वपूर्ण सरसामान हराउन सक्नेछ । अनावश्यक ठाउँमा खर्च बढ्नेछ । साथीभाइसँग रमाइलो एवं खानपिनमा पैसा बढी जानेछ । सरसामान हराउन सक्ने एवं व्यवसायमा घाटा हुन सक्नेछ । साताको अन्त्यमा भने व्यवसायमा आम्दानी बढ्ने एवं लगानीका राम्रो प्रतिफल आउनेछ ।
Last Updated on: February 5th, 2021 at 6:53 pm